Walmart Canada Aromatherapy diffuser Miaraka amin'ny Auto Off China Manufacturer
Description:Walmart Canada Aromatherapy diffuser,Aromaterapy diffuser Walmart Canada,Sear Oil diffuser
Home > Products > Scent diffuser > Walmart Canada Aromatherapy diffuser Miaraka amin&#39;ny Auto Off
Walmart Canada Aromatherapy diffuser Miaraka amin'ny Auto Off
Fonosana: Boaty anatiny: 170 * 170 * 255mm ary carton Master: 525 * 355 * 530mm / 12pcs
Ny diffuser ny hanitra dia afaka mitazona rano 400ml. Miaraka amin'ny teknolojia ultrasonic, io diffuser ultrasonic io dia milamina rehefa miasa. Ny diffuser fofona dia manampy betsaka amin'ny fitazonana ny hamandoana tsara sy ny famelomana ny kalitao amin'ny rivotra. Ny fialan-tsasatra lehibe mandritra ny ora fiasam-birao. Rehefa lany ny rano fitehirizana, ny fofona manitra ao an-trano dia hiala ho azy, azo antoka ary azo antoka. Fandidiana ny fitaovana; Ampidiro ao amin'ny plug ao an-damosin'ny diffuser hazo ny vatan'ny DC. Mametraka ny singa eo amin'ny tany lemaka sy henjana. Esory ny fonony ambony amin'ny fotony. Fenoy rano ny tanky misy rano kaopy amin'ny haavon'ny Max. Manampy menaka fitetezana menaka 3-5 ao anaty rano. (Fenoy rano foana alohan'ny hanampian'ny menaka tena izy.) Apetaho eo ambony ny fonony ambony. Azafady azonao antoka fa mifanaraka tsara izany. Midira ary kitiho ny diffuser mampiasa ny bokotra fona.
Faritra fandrakofana arakaraka: hatramin'ny 30-60㎡
Input: 100-240-Volt, 50 / 60Hz
Vokatra: 24-Volt, 650mA, 13-Watt.
Ultrasonic Humidifier Weight: 430g. Tranon-tsaboina natokana: 400 ml Akora ilaina: Adapter, Cup of Measuring, Manual
Fitaovana: ABS + PP
Rano: Rano / Mamatotra rano
Mahavelona sy famoahana zavona be dia be: mety hahatratra 400 ml eo ity hazo hazo ity ary afaka mitohy hatramin'ny 12 ora ny famoahana mitohy, fanidiana ho an'ny fiarovana tsy tapaka fa rehefa zatra ny rano.
Jiro taratra azo arovana: azonao atao ny misafidy loko 7 eo anelanelan'ny fomba roa; miorina tsara na miova loko.
Fampiasa arifotra azo atao: azonao atao ny misafidy na ambany havoana ambany na ambany, dia diffuser menaka ilaina amin'ny ultrasonic io nefa azonao atao koa ny maha-humidifier raha tianao
Ny fanaparitahana menaka tena izy dia rakotra varimbazaha kitay
Ny fampihenana aromaterapy tsara indrindra ho an'ny fihenan-tsasatra mampihetsi-po Contact Now
80ML Aromatherapy diffuser ho an'ny zaza madinidinika Contact Now
10ml tsara indrindra diffuser ho an'ny menaka Aromaterapy Contact Now
Electric Aromatherapy diffuser Amin'ny menaka manitra Lemon Contact Now
Walmart Canada Aromatherapy diffuser Aromaterapy diffuser Walmart Canada Sear Oil diffuser Walmart Aromatherapy diffuser Walmart Aromatherapy Oil diffuser Smart Aromatherapy diffuser Amazon India Aromatherapy diffuser Smart Wifi Aromatherapy diffuser
Copyright © 2019 Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. Zo rehetra voatokana.